Phaaphaasii Filip Wiilsan yakka sarbamiinsa saalaa dhoksite erga jedhamanii aangoosaanii dhiisuuf - BBC News Afaan Oromoo
Phaaphaasii Filip Wiilsan yakka sarbamiinsa saalaa dhoksite erga jedhamanii aangoosaanii dhiisuuf
Filip Wiilsan yakka sarbamiinsa saalaan walqabatu dhoksuun yakkaman
Phaaphaasiin mana amantaa kaatoolikii Awustiraaliyaa Filip Wiilsan yakka gudeeddii daa'immanii waahiluma amantaa isaaniin raawwatame dhoksuun himataman, amma aangoorraa bu'uuf jedhu.
Kibba Awustiraaliyaa naannawa Adelaide jedhamtutti Phaaphaasii kan ta'an Filip Wiilsan, wayita manni murtii luba fedhii saalaa daa'imman waliin raawwate tokko qorataa turetti, irra goranii dhugaa ukkaamsuu isaaniitiin yakkamaa ta'aniiru.
Hayyu dureen amantaa Kaatoolikii buleessi kun yakka akkanaatiin wayita himataman kun addunyaarraa isa jalqabaati.
Yakka raawwachuusaanii erga baraniis aangoosaanii Jimaata dhufu akka gadi dhiisan murteessan Phaaphaasichi.
''Yakka raawwatameef adabbii na eeggatu kamuu, hanga aangoo kiyya gadi dhiisuutti nan keessummeessa'' jedhan.
Himata manni murtii naannoo Newcastle irratti bane, kan waggaa lama isaan adabsiisuu danda'u ilaalchisuun ol iyyannoo ni dhiyeeffatumoo hin dhiyeeffatan kan jedhurratti garuu waan ibsan hin qaban.
Phaaphaasii Filip Wiilsan ,fedhii saalaaf jecha sarbamiinsa dargaggoo gargaaraa Lubaa ture, kan bara 1970oota keessa raawwate haalaan beeku, garuu gabaasuu dhiisanii dhugaa dhoksanii yoona ga'an jechuun manni murtii Kibxata kaleessaa himateera.
Maqaa gaarii mana amantichaa eeguuf jecha mirga namaa sarban ittiin jedheera manni murtii.
Namoonni yakka fedhii saalaa daa'immaniif jecha raawwatamu jalaa miliqan murtii fudhatametti baayyee gammadan, manni amantaa dirqama seeraa akkasii akka qabaatu barsiisuu keessatti kun jalqabbii gaariidhas jedhaniiru.
Qaamoleen Tigraayitti wal waraanan 'yakka waraanaa fi dhala namaarratti raawwatan' - UN
'Loltoonni Ertiraafi Amhaaraa Tigraay keessaa akka bahan barbaadna'
Barataan hanga ganna 13tti dubbisuufi barreessuu hin dandeenye amma PhD barachuu eegale
Himannaan gudeeddii akkamiin siyaasa Awustiraaliyaa raasee?
Maariyaa Keerii kanaan dura obboleettiin, amma ammoo obboleessan himatamte
Konkolaataan Nasa'n Maarsirra qubachiise suurawwan ajaa'ibaa ergaa jirti
Dhiyeenya Jibuutiitti godaantota galaanatti darbaman keessaa 20 du'an